महामहिमको गर्जनको अर्थ
दुत पुन -
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी गणतन्त्र दिवसको दिन बाघ जस्तै गर्जिए । गत सोमबार (२९ मे) का दिन लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. सुवेदीले भने, ‘राजदूतको आफ्नै मूल्यमान्यता, मर्यादा उचाई तथा सीमा हुन्छ, म सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने असाधारण राजदूतलाई वडा अध्यक्ष भन्दा तल राख्नु हँुदैनथ्यो । बरु हामीलाई नबोलाउनुस् ।’
प्रसंग अघिल्लो आइतबार तमुधिं, यूकेले आयोजना गरेको गोर्खा कपको हो । राजदूत सुवेदीको आक्रोश उक्त कार्यक्रममा आफूलाई प्रमुख अतिथि नबनाएर रसमोर बोरो काउन्सिलका मेयरलाई प्रमुख अतिथि बनाएकोमा हो । उनले यसबाट आफ्नो अपमान भएको बताए । उनले अझ अगाडि बढेर बेलायतमा रहेका १ सय ६५ वटा देशका राजदूतकै सरह आफ्नो हैसियत भएको उल्लेख गर्दैै मर्यादाक्रमको ख्याल गर्न आयोजकलाई चेतावनी नै दिए ।
‘विदेशीको माझमा नेपालको टोपी लगाएको राजदूतको शीर नझुकाउनुस्, मेरो शीर झुक्नु भनेको समस्त नेपालीको शीर झुक्नु हो’, उनले थपे, ‘राजदूतको अपमान गरेर अन्य नेपालीको सम्मान हुन्न ।’ त्यसपछि बुधबार ३१ मेको दिन तमुधिं युकेले गोर्खा कपमा कमिकमजोरी भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यसपछि नेपाली दूतावास बेलायतले पनि नरोएको मान्छेलाई सन्त्वना दिँदै आँसु पुछिदिएजस्तो गरी प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विवाद टुंगिएको जानकारी दियो ।
तमुधिं, युके र दूतावास दुवैले विवाद टुङ्गिनुको साथै भविष्यका कार्यक्रमहरुमा दुवै संस्था मिलेर सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने भनिए तापनि विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका अभिव्यक्तिहरुलाई नियालेर हेर्दा यी दुवै संस्थाको बीचमा ठूलो दरार, टकराव र तुषको खाडल अझै पुरिएको देखिन्न । बेलायतवासी नेपाली तथा बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक, भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत र त्यहाँका कर्मचारीबाट पाउनु पर्ने माया, सम्मान र इज्जत कहिल्यै पाएका छैनन् ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत र दूतावासका कर्मचारीले विगतदेखि नै आफ्नो काम कर्तव्य, उद्देश्य, मूल्यमान्यताबाट चुकेको तथा धेरै टाढा भागेको महसुस हामीले गरेका छौं । गणतन्त्र अगाडिको कुरा गर्ने हो भने राजदूत राजपरिवारका नातेदारहरु मात्र नियुक्त हुन्थे । दूतावास राजपरिवारको होलिडे होम र स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । कर्मचारीहरु उनीहरुको निजी कारिन्दाजस्ता थिए । दूतावासले बेलायत र नेपाल सरकारको सम्बन्ध सुमधुर बनायो होला । तर, बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारको हकहित, सेवा सुविधा र अधिकारको बारेमा कहिल्यै एक शब्द पनि बोलेन ।
देशमा गणतन्त्र आएपछि धेरै वर्षसम्म राजनीतिक खिचातानीले राजदूतको नियुक्ति हुन सकेन । प्रायः प्रथम सचिवहरु नै कार्यवाहक राजदूतका रुपमा रहे । हरिकुमार श्रेष्ठ, झपिन्द्र अर्याल, तेजबहादुर क्षेत्री र हरिकुमार श्रेष्ठले कार्यवाहकको रुपमा काम गरे । तेजबहादुर क्षेत्रीले भने धेरै राम्रा कामहरु गरे । उनैको पालामा संयुक्त अधिराज्य बेलायतका विभिन्न सहरहरुमा बसोबास गर्ने नेपालीका घरघरमै एमआरपी पासपोर्ट पु¥याए । बेलायतमा रहेका नेपाली संघ संस्थाहरुको प्रियपात्र बन्न सफल भए । त्यस्तै राजदूतहरुको कुरा गर्दा गणतन्त्र आउनुअघिका अन्तिम राजदूत सिंहबहादुर बस्नेत स्वर्गीय राजा महेन्द्रका बहिनीज्वाइँ थिए । गणतन्त्र आएपछि उनलाई फिर्ता बोलाइए । त्यसपछि प्रथम सचिव हरिकुमार श्रेष्ठले निकै वर्ष जिम्मेवारी सम्हाले । उनी फर्केपछि पनि लामो समयसम्म राजनीतिक खिचातानीले गर्दा राजदूतको नियुक्ति हुन् सकेन । झपिन्द्र अर्यालले कार्यवाहक राजदूत भए । गणतन्त्र पछिको पहिलो राजदूत मुरारीराज शर्मा आए । उनको कार्यकाल पनि डामाडोल भएरै बित्यो । उनले चाहेको भए उनको समयमा भूतपूर्व गोखा र तिनका परिवारहरुले बेलायतमा हकहित र अधिकारको लागि चलाएको आन्दोलनलाई धेरै मद्दत पु¥याउन सक्थ्यो । तर, राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको भएर होला उनले बेलायतवासी नेपाली तथा बहालवाला गोखा सैनिक र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारका लागि केही गरेनन् । गणतन्त्रपछिका दोस्रो राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसे नयाँ जोश जाँगर तथा फुर्तीका साथ पदभार सम्हाल्न आइपुगे । बेलायतवासी नेपालीहरुको मन जित्न निक्कै सफल भए । तर, गोर्खा सैनिकले देखाएको बहादुरीबाट बेलायती महारानी, सरकार र जनता प्रशन्न भई बिर्तास्वरूप पाएको मायाको चिनो लन्डनस्थित नेपाली दूतावास बेच्ने प्रकरणमा उम्किनै नसक्ने गरी फसे । कालो कलंक लगाएर गए । यसले उनलाई भविष्यमा पनि छाड्ने छैन । साँच्चो कुरो पच्दैन तर वास्तविक कुरो गर्ने हो भने बेलायतको लागि नेपाली राजदूत र दूतावासमा गणतन्त्र अघि पूर्वराजपरिवार र उनका नजिकका नातेदारको हालीमुहाली थियो भने गणतन्त्रपछि आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने एकलजातिको हालीमुहाली छ ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत र दूतावासका कर्मचारीले बेलायतबासी नेपालीलाई कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने बारेमा एउटा प्रसंग जोड्न चाहन्छु, ‘२००१ को कुरो हो र म ब्रिटिस आर्मीमा सेवारत थिए । ब्रुनाईबाट बेलायती जनताको जनसम्पर्क सेवा व्यवस्थापन गर्नको लागि एडिन्बोरो टाटु परेडमा एक महिनाको लागि काजमा खटिएको बेला मेरो पासपोर्ट हरायो । पासपोर्ट हराएपछि स्थानीय प्रहरीलाई खबर गरे र एक हप्ता बितेपछि मेरो हराएको पासपोर्ट प्राप्त भयो कि भएन भनेर सम्पर्क गरे । पुलिसबाट भेटेको छैन भन्ने उत्तर आयो । त्यसपछि सोझै नेपाली राजदूतावास लन्डनमा सम्पर्क गरेर पासपोर्ट हराएको जानकारी दिएँ । अनि नयाँ पासपोर्ट निकाल्नको लागि चाहिने कागजपत्रको बारेमा जानकारी लिए । चाहिएको कागजपत्र बोकी लन्डन पुगें र लन्डन पुगेर चाहिएको कागजपत्र सबै पेस गरे । दूतावासको कर्मचारीले आज हुँदैन एक हप्ता लाग्छ भनेर जानकारी दिए । म एक हप्तापछि ब्रुनाई जाने हो, आजै स्कटल्यान्ड फर्कन पर्छ मलाई मेरो राहदानी आजै चाहिन्छ भनी अनुरोध गरेँ । महामहिमले भनेका छन् यसको छानबिन गर्न अझै एक हप्ता लाग्न सक्छ उनको जवाफ थियो । ठीक छ म छ दिनपछि आउँछु भनेर स्कटल्यान्ड फर्किए । छ दिनपछि फर्केर आउँदासम्म बनेको थिएन अनि राजदूतसम्म भेट्ने मनसाय व्यक्त गरें । राजदूतलाई भेट्न दिन मानेका थिएनन् । तर, म निक्कै कडा भएर प्रस्तुत भएपछि कार्यवाहक राजदूत हरिकुमार श्रेष्ठलाई भेटेर के हो हजुरको नियत ? के म नेपाली नागरिक होइन ? के राहदानी भनेको हराउन सक्ने डकुमेन्ट होइन ? राहदानी हरायो ठीक छ तर नयाँ राहदानी जारी गर्नको लागि चाहिने डकुमेन्ट सबै पेस गरेको छु, केले र कस्ले रोक्यो मेरो राहदानी भनेर जंगिए । अझै कार्यवाहक राजदूत हरिकुमार श्रेष्ठले आनाकानी गर्दै थिए । मैले अगाडि भने, के मैले यो राजदूतावासलाई दिएको योगदान भुल्नु भयो ? राजदूतावासको हरेक अवसरमा मैले सहयोग गरेको बिर्सिनु भयो भनेर गर्जिएपछि मात्र मलाई राहदानी दिए । वास्तवमा म युकेमा ब्रिटिस आर्मीमा सेवारत रहँदासम्म राजदूतावासले सञ्चालन गरेको विभिन्न कार्यक्रम र नेपाली चाडपर्व तथा अवसरहरुमा मिनी व्यान्ड तथा पाइपर पठाएर सांगीतिक कोसेली पस्केर सहयोग गर्थें ।’
आजभोलि नेपाली राजदूत र उनका कर्मचारीले गर्ने व्यवहारमा केही परिवर्तन आए तापनि केही समय अगाडिसम्म उनीहरुले सेवाग्राहीसँग गर्ने बोली र व्यवहार अत्यन्तै रुखो थियो । कार्यालय र शौचालय पनि दुर्गन्धित र अव्यवस्थित थियो । त्यसैले होला तमुधिं युकेको ल्होछार कार्यक्रममा घान्द्रुक समाज, युकेले एउटा कमेडी प्रस्तुत गरेको थियो । कमेडी यस्तो थियो, ‘तमुधिं युकेले लामा गुरुज्युलाई ल्होछारको लागि युके बोलाएको थियो । लामा गुरुज्युलाई युकेका पत्रकारले लिएको अन्तर्वार्ताको एक अंश यसरी सुरु हुन्छ, ‘पत्रकारको प्रश्न, लामा गुरुज्यु युके कस्तो लाग्यो ? कहाँ कहाँ घुम्नु भयो ? लामा गुरुज्यु उत्तर दिन्छन्, युके राम्रो लाग्यो सबैको माया पायो, सबै इस्ट मित्रले खाना खान बोलाए । खाना खाएँ । खाना धेरै खायो भने दिसा पिसाब आउँदो रैछ र शौचालय कहाँ छ भन्दा उता देखाउँछन् र शौचालय गयो शौचालय सफा छ शौचालयको पानी पनि सफा छ नेपालको धाराको पानीभन्दा सफा र यस्तो सफा शौचालयमा दिसा पिसाब आएन र छ सात दिनसम्म दिसापिसाब नगरेर बसेको थिएँ । मेरो एउटा साथीले लन्डनमा नेपाली राजदूतावास घुम्न जाउँ भन्यो । उनीसँगै नेपाली दूतावास घुम्न गएँ । त्यहाँको शौचालय ठ्याक्कै नेपालको जस्तो ठ्वास्स गन्हाउने रहेछ र त्यही नै छ सात दिन खाएको सबै फ्याँकेर आएँ । भन्नसाथ सबै दर्शक मुर्छा परेर हाँसे ।’
विगतका राजदूत र उनका कर्मचारीले गरेका कार्य र व्यवहारले बेलायतवासी नेपालीहरुको मस्तिष्कमा नकारात्मक मनोविज्ञान पैदा गरेको भए पनि डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीले आफ्नो कार्यभार राम्रैसँग सुरुआत गरेका थिए । विभिन्न संघ संस्थाको घरघर, दैलोदैलोमा पुगेर धेरै दुःख, सुख बाँड्न सफल भएका थिए । त्यस्तै भूतपूर्व गोर्खा र उनका परिवारले चलाएको सत्याग्रह आन्दोलनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अतिनै स्वागतयोग्य कार्य हुँदै गर्दा गणतन्त्र दिवसमा एक्कासी आवेशमा आएर अलि बढी नै गर्जिए कि ? जस्तो लागेको छ ।
यसरी पब्लिक र मिडियाको सामु गर्जिदा सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक असर पर्यो कि भन्ने मेरो ठम्याई हो । हुन त, डा. सुवेदीले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र महारानीसमक्ष पेस गरेपछि बोलाइएको रिसेप्सन भोजमा विगतका राजदूतहरुले जस्तै आफ्नै वरिपरिका व्यक्ति र संघ संस्थालाई मात्र बोलाएको र बेलायतवासी विभिन्न संघ संस्था र उनका अग्रजहरुलाई समेट्न नसकेको भनि गुनासो र आलोचना खेपिसकेका छन् । बेलायतवासी संघ संस्थाहरु बेलायतको लागि नेपाली राजदूत अभिभावक भएर अभिभावककै भूमिका खेलिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, आजसम्मका राजदूत र उनका कर्मचारीले बेलायतवासी नेपाली तथा भूतपूर्व गोर्खा तथा उनका परिवारलाई न्यानो माया दिन सकेका छैनन् । सायद विभिन्न देशहरुमा नेपालीहरुको विभिन्न समस्या होलान् तर बेलायतवासी नेपाली तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्या भनेको उनको समकक्षीसरह समान सेवा सुविधा र समान पेन्सनको नपाउनु नै हो । उनीहरु आफ्नो आन्दोलनमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी अग्रणी भूमिका खेलेको प्रत्यक्ष देख्न चाहन्छन् ।
तमुधिं, युके एउटा गौरव बोकेको संस्थाको रुपमा स्थापित छ । जुन संस्थाको महासचिव कृष्ण गुरुङले गोर्खा कपको प्रमुख अतिथि रसमोर बोरो काउन्सिलको मेयर भएको र उनले महारानीको प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै पटकपटक माइकिङ गरी सुसूचित गरेको सुनेको थिए । जुन माइकिङको सूचनाअनुसार मैले के बुझेको थिए भने गोर्खा कपको प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिमा केही प्राविधिक कठिनाइ भएको र त्यसलाई सहज बनाउनको लागि महासचिवले सहजकर्ताको भूमिका खेलिरहेको छ । यही कुरा महामहिम सुवेदीलाई मन नपरेपछि भोलिपल्ट सोमबार गणतन्त्रको दिनमा आक्रोशको रुपमा पोखियो । जे होस् तमुधिं, युके र नेपाली राजदूतावास लन्डन दुवैतर्फबाट आ–आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा कमीकमजोरी भएको र भविष्यमा सच्याइने, भावी कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रेस विज्ञप्तिहरु स्वागतयोग्य छन् । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बेलायतवासी नेपालीहरुको अभिभावक हुन् र त्यस्तै नेपाली दूतावास हाम्रो मूल घर हो । महामहिम राजदूतज्युले बेलायतवासी नेपालीहरुको हकहित, समस्या र अधिकारको लडाइमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् र सम्पूर्ण बेलायतवासी नेपालीहरुले पनि हाम्रो देशको राजदूत भनेर गर्व र सम्मान गर्न सिकौं । हामी नेपालीहरु एकअर्का बीच सम्मान गर्न सिकौं र एउटा नेपालीले लगाएको शिरको टोपी कहिल्यै पनि नझुकोस् । यही मेरो शुभकामना ।